Duqa Muqdisho oo xariga ka jaray laami lacagtii lagu dhisay ay bixiyeen Dadka Deegaanka. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Duqa Muqdisho oo xariga ka jaray laami lacagtii lagu dhisay ay bixiyeen...
Duqa Muqdisho oo xariga ka jaray laami lacagtii lagu dhisay ay bixiyeen Dadka Deegaanka.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho ayaa maanta xariga ka jaray laamiga xiriira Baar Ubax & Warshaddii Taraqa iyo Sigaar ah oo lacagta lagu dhisay laga qaaday Dadka degen hareeraha Laamiga.
Wadadaan oo muhiim u ah isku xirka Warshadaha iyo Soddonka ayaa burbur xooggan soo gaaray, meelaha qaar waxaa fadhiisan jiray biyaha roobka, waxaana dhibaatooyin ku qabay Dadka Deegaanka & Gaadiidka nuucyadiisa kala duwan.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Finish) ayaa Shacabka faaiidada ku qaba waddadaas ugu baaqay in ay ilaaliyaan si looga badbaadiyo burbur markale soo gaara.
“Waddo laami ah in la dhiso wax fudud ma aha, waxyaabaha danta guud ah Bulshada ayaa wada leh, ha ogolaalina in qof kale ama qof idinka mid ah uu qashin ku shubo ama soo dhex dhigo waxyaabo xun, dhibaato badan ayaa loo maray suuragelinta waddadaan & kala fududeynta Saxmadda (Cariiriga) Magaaladaan” ayuu yiri Duqa Muqdisho.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Finish) ayaa ka digay in Biyaha lagu celiyo waddada la dhisay oo dhibaato ku ah, waxaana uu sheegay in loo dhisay meelo ay biyaha maraan.
“Ma aqbali doonno in waddooyinka lagu soo jaro carro iyo dhagaxaan si laamiga looga dhigo sida Warta biyaha fadhiistaan, in laamiga biyaha roobka lagu celiyo oo uu burburo sida laamiga Daallo oo kale wax loo dulqaadan karo ma aha waxaana ka dhalanaya ganaax adag” Sidaasi waxaa yiri Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Gobolka Banaadir waxa uu sheegay in maxkamad lasoo taagi doonno dadka ku ganacsada Gaari-gamacada waddada xiriirisa Isgoysyada Balaagsii & Bakaaraha (Waddada loo yaqaan Cirtoogte) oo saxmad noqotay.
“Waddada Cirtoogte adiga shakhsi ahaan meel aad ka martid ma arkeysid, maanta kaddib haddii lagu arko hal gaari-gacan oo yaalla, cidda soo dhigatay maxkamad ayaa loo gudbinayaa agabkoodana meel fagaare ah ayaa lagu gubayaa, mas’uulkii ka gaabiyo xilka ayaan ka qaadeynaa” Waa sida uu yiri Duqa Muqdisho.
Previous articleMaxay kawada hadleen Axmed Madoobe & Taliyaha howlgallada Mareykanka ee Soomaaliya?
Next article61 Weerar oo Afrika ka dhacay September ayaa sababay dhimashada 1006-ruux!